Talaash (2012) | MM Movie Store
ဝိညာဉျ ရှိတာ ယုံနိုငျမလားဆိုတဲ့မေးခှနျးမြိုးအမေးခံရဖူးလား မိတျဆှေ ????သိပ်ပံပညာ ထှနျးကားနတေဲ့ခတျေမှာပရလောက ကိုလကျမခံလညျးမရဘူးဆိုတာကိုဒီဇာတျကားလေးက ပွောပွနမှောပါ။IMDB 7.3/10 ရရှိထားတဲ့အတှကျအတျောအတနျအောငျမွငျထားတဲ့ဇာတျကားလေးလို့ ဆိုနိုငျပါသေးသညျ။
(ဇာတျလမျးအကဉျြး)ညတဈညမှာပေါ့ ။ရုပျရှငျမငျးသား အမနျကပူးဟာအကျစီးဒငျ့ဖွဈပှားခဲ့ပွီးသဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ဖွဈပှားတဲ့နရောကလညျးလူခွတေိတျ နပွေီး လမျးကလညျးအရှငျးသားဖွဈနပေါတယျ။ဒီအဖွဈဟာ သမရိုးကတြော့မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာကိုအငျစပကျတာ Surjan ကသုံးသပျလိုကျပါတယျ။
Surjan ဟာ ထူးခြှနျတဲ့ ရဲမှူးတဈဦးဖွဈပွီးလကျအောကျငယျသားတှရေဲ့ လေးစားမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားသူပါ။ထို့နောကျ အမနျကပူးသဆေုံးမှုကိုဖျောထုတျရနျSurjan ကွိုးပမျးခဲ့တယျ။တဈဖကျမှာလညျးရှရှီ ဆိုတဲ့ပွညျ့တနျဆာခေါငျး ဟာလညျးအမနျကပူးသဆေုံးမှုကို ကွားရှိပွီးနောကျသူရဲ့အိမျကနေ ထှကျပွေးရှောငျပွေးဖို့ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။
ရှရှီမှာ ခွတေဈဖကျမသနျတဲ့ တပညျ့လေးတဈယောကျရှိပါတယျ။သူ့နာမညျက တာမွူး။ရှရှီဟာ သူရဲ့အသုံးအဆောငျတှကေိုထုပျပိုးရငျးနရောရှောငျခဲ့ပါတယျ။သူ သုံးနတေဲ့ဆငျးကဒျကိုလညျးအသဈပွောငျးသုံးခဲ့ပါသေးတယျ။ထိုအခြိနျမှာတော့လှငျ့ပဈလိုကျတဲ့ ဆငျးကဒျကို တာမွူးအသုံးပွုလသေျောအခါ ။ဘာတှဆေကျဖွဈမှာလဲ။
ဘာတှကှေငျးဆကျပျေါလာလဲ ဆိုတာကိုစိတျလှုပျရှားစှာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။အငျစပကျတာ Surjan အကွောငျးထပျပွောရရငျသူဟာမိသားစုရေးရာ စိတျထိခိုကျမှူ ရှိထားခဲ့သူပါ။သူရဲ့သား ကရနျဟာရနေဈသှားခဲ့တာကွောငျ့သူကိုယျသူ့အပွဈရှိသလို မှတျယူထားသူပါ။ဒါပမေဲ့ သူ့သားဝိညာဉျ ရှိနတောကိုတော့မယုံသူတဈဦးပါ။
သူ့မိနျးမကတော့ သူ့ဝိညာဉျနဲ့ဆကျသှယျပွောဆိုလိုသူပါ။တဈနမှေ့ာတော့ သူတို့အိမျနီးခငျြးတဈယောကျဟာသူတို့ရဲ့သား ကရနျ ဝိညာဉျနဲ့တှဆေုံ့သညျဟုသတငျးကွားမိလသေညျ။ထိုအခါမှာ သူ့သားဝိညာဉျနှငျ့ဆကျသှယျလိုသောSurjan မိနျးမ /အယုံအကွညျမရှိသော Surjan /သူတို့နှဈဦးကွား ပွဿနာတှကေလညျးSurjan အတှကျ စိတျဖိစီးမှုမြားစခေဲ့ပါတယျ။
Surjan ဟာ အမနျကပူးရဲ့ သဆေုံးခွငျး အတှကျမှူခငျးရှာဖှရေငျး ရိုဆီ ဆိုတဲ့ပွညျ့တနျဆာလေးနဲ့ဆုံတှခေဲ့ပါသေးတယျ။ရိုဆီ ဟာ Surjan အတှကျကူညီသူတဈဦးဟု ယူဆကာအမှုအတှကျ အရေးပါသူတဈဦးလညျးဖွဈခဲ့ပါသေးတယျ။ဒီဇာတျကားမှာတော့ရုတျခွညျးတှဆေုံ့ခဲ့ရတဲ့ ရိုဆီဟာSurjan အတှကျဘာတှဖေျောထုတျပေးနိုငျခဲ့သလဲ။ရို
ဆီရဲ့အတိတျဇာတျကွောငျးနဲ့ဘဝဖွဈပကျြမှုအကွောငျးကရော။ဝိညာဉျ မယုံသော Surjan အတှကျမညျသို့သော ဖွဈရပျမြိုးမညျသို့သော လုပျရပျမြိုးကအံ့အားသငျ့စခေဲ့မလဲ။သူ့သားလေး ကရနျကရောဝိညာဉျဖွဈနခေဲ့မညျလော။Surjan ရဲ့မိသားစုအခွအေနအေမှုအခငျးအောငျမွငျမှုတှကေရော။
အမနျကပူးသဆေုံးမှုကမတျောတဆလား။လုပျကွံသတျဖွတျမှုလား။အမနျကပူးရဲ့ လူမသိသောနောကျကှယျအတိတျဖွဈရပျတှကေရော။စတဲ့ မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာကသငျ့အား စိတျလှုပျရှားစမှောပါ။အတနျငယျရှုပျထှေးသညျဟုထငျမွငျရသျောလညျးဇာတျကားရဲ့ရညျရှယျခကျြက အရသာမပကျြသှားပါဘူး။
မတ်ေတာ တရားတှပေေါငျးစညျးပွီးဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့လူ့သဘာဝနဲ့ပရလောက ကိုပါထညျ့သှငျးရောနှောထားသောကွောငျ့အထူးစိတျဝငျစားဖှယျကောငျးလှပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကွညျ့ရှုရငျးရငျခုနျလိုကျကွပါဦးလို့။
ဝိညာဉ် ရှိတာ ယုံနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးအမေးခံရဖူးလား မိတ်ဆွေ ????သိပ္ပံပညာ ထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာပရလောက ကိုလက်မခံလည်းမရဘူးဆိုတာကိုဒီဇာတ်ကားလေးက ပြောပြနေမှာပါ။IMDB 7.3/10 ရရှိထားတဲ့အတွက်အတော်အတန်အောင်မြင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးလို့ ဆိုနိုင်ပါသေးသည်။
(ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း)ညတစ်ညမှာပေါ့ ။ရုပ်ရှင်မင်းသား အမန်ကပူးဟာအက်စီးဒင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကလည်းလူခြေတိတ် နေပြီး လမ်းကလည်းအရှင်းသားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအဖြစ်ဟာ သမရိုးကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအင်စပက်တာ Surjan ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။
Surjan ဟာ ထူးချွန်တဲ့ ရဲမှူးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ လေးစားမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူပါ။ထို့နောက် အမန်ကပူးသေဆုံးမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်Surjan ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှရှီ ဆိုတဲ့ပြည့်တန်ဆာခေါင်း ဟာလည်းအမန်ကပူးသေဆုံးမှုကို ကြားရှိပြီးနောက်သူရဲ့အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးရှောင်ပြေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
ရှရှီမှာ ခြေတစ်ဖက်မသန်တဲ့ တပည့်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့နာမည်က တာမြူး။ရှရှီဟာ သူရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုထုပ်ပိုးရင်းနေရာရှောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ သုံးနေတဲ့ဆင်းကဒ်ကိုလည်းအသစ်ပြောင်းသုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ထိုအချိန်မှာတော့လွင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ဆင်းကဒ်ကို တာမြူးအသုံးပြုလေသော်အခါ ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ။
ဘာတွေကွင်းဆက်ပေါ်လာလဲ ဆိုတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။အင်စပက်တာ Surjan အကြောင်းထပ်ပြောရရင်သူဟာမိသားစုရေးရာ စိတ်ထိခိုက်မှူ ရှိထားခဲ့သူပါ။သူရဲ့သား ကရန်ဟာရေနစ်သွားခဲ့တာကြောင့်သူကိုယ်သူ့အပြစ်ရှိသလို မှတ်ယူထားသူပါ။ဒါပေမဲ့ သူ့သားဝိညာဉ် ရှိနေတာကိုတော့မယုံသူတစ်ဦးပါ။
သူ့မိန်းမကတော့ သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုသူပါ။တစ်နေ့မှာတော့ သူတို့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့သား ကရန် ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ဆုံသည်ဟုသတင်းကြားမိလေသည်။ထိုအခါမှာ သူ့သားဝိညာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်လိုသောSurjan မိန်းမ /အယုံအကြည်မရှိသော Surjan /သူတို့နှစ်ဦးကြား ပြဿနာတွေကလည်းSurjan အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများစေခဲ့ပါတယ်။
Surjan ဟာ အမန်ကပူးရဲ့ သေဆုံးခြင်း အတွက်မှူခင်းရှာဖွေရင်း ရိုဆီ ဆိုတဲ့ပြည့်တန်ဆာလေးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ရိုဆီ ဟာ Surjan အတွက်ကူညီသူတစ်ဦးဟု ယူဆကာအမှုအတွက် အရေးပါသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ရုတ်ခြည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ ရိုဆီဟာSurjan အတွက်ဘာတွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ။ရို
ဆီရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ဘဝဖြစ်ပျက်မှုအကြောင်းကရော။ဝိညာဉ် မယုံသော Surjan အတွက်မည်သို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုးမည်သို့သော လုပ်ရပ်မျိုးကအံ့အားသင့်စေခဲ့မလဲ။သူ့သားလေး ကရန်ကရောဝိညာဉ်ဖြစ်နေခဲ့မည်လော။Surjan ရဲ့မိသားစုအခြေအနေအမှုအခင်းအောင်မြင်မှုတွေကရော။
အမန်ကပူးသေဆုံးမှုကမတော်တဆလား။လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုလား။အမန်ကပူးရဲ့ လူမသိသောနောက်ကွယ်အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေကရော။စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာကသင့်အား စိတ်လှုပ်ရှားစေမှာပါ။အတန်ငယ်ရှုပ်ထွေးသည်ဟုထင်မြင်ရသော်လည်းဇာတ်ကားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အရသာမပျက်သွားပါဘူး။
မေတ္တာ တရားတွေပေါင်းစည်းပြီးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့လူ့သဘာဝနဲ့ပရလောက ကိုပါထည့်သွင်းရောနှောထားသောကြောင့်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ဒါကြောင့် ကြည့်ရှုရင်းရင်ခုန်လိုက်ကြပါဦးလို့။